Olee otú Hichapụ Kọntaktị na iOS na ogbe | Wepụ Ndi ana-akpo si iOS
Ihichapụ kọntaktị niile, ma a na iri na abuo ma ọ bụ otú nọgidere. M na ebe ọ bụ na agbanyụrụ iCloud na-anọrọ nsogbu. Ọ dịghị ludo. M ọbụna gbalịrị erasing kọntaktị niile na m MBP na mgbe ahụ overwriting Ndi ana-akpo na iPad na iTunes. Na-ekweghị na-arụ ọrụ ma.
Nwere nsogbu mgbe na-agbalị Nhichapụ kọntaktsị na iOS? Ọ bụrụ na gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod adreesị akwụkwọ jupụtara na-abaghị uru kọntaktị, nwere ike ị chọrọ iji wepụ ha ozugbo. Iji wepu otu ma ọ bụ ole na ole kọntaktị, ị nwere ike ịga Ndi ana-akpo ngwa gị iDevice, na pịa na onye ị chọrọ ka ihichapụ. Wee pịa "Dezie". Gbadaa na ala nke ihuenyo na pịa "Hichapụ". Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị nwere 550 kọntaktị na mkpa ihichapụ, ị ka na-eji nke a ntugheriukwu ụzọ? Kwa tedious na-ewe oge, na-adịghị ị na-eche? Ka njọ, ọtụtụ ọrụ na-ahụ na ọbụna ha na-enweghị ike ịchọta "Dezie" ala mgbe upgrading iOS ka iOS 6. Ọ bụrụ na nke a mere, ihe i nwere ike ime?
Ikpochapụ kọntaktị na iOS, ụzọ kasị mma bụ na-amalite a ọkachamara iOS ihichapụ kọntaktị ngwa. Ebe a bụ nri otu maka gị. Wondershare TunesGo Ochie na-akpan iji nyere gị aka jikwaa ihe niile na gị iPhone, iPad na iPod ala. Na ya aka, ị na-enwe ike iji wepụ multiple kọntaktị ozugbo, nke kpam kpam aka ị nke a bothersome kọntaktị mwepụ.
Ụzọ dị mfe ka ihichapụ kọntaktị site na iOS 6
Ebe a, anyị ga-amasị ịme ka ị na ụzọ dị mfe ka ihichapụ kọntaktị site na iOS 6. The nzọụkwụ bụ otu mgbe gị iOS ngwaọrụ agba iOS 7 ma ọ bụ iOS 5. Download a ngwa na-eso anyị ugbu a.
Nzọụkwụ 1. Run a usoro na jikọọ na gị iOS ngwaọrụ PC
Ná mmalite, wụnye a kọntaktị mwepụ omume na PC gị. Na-agba ọsọ a usoro na desktọpụ kọmputa gị.
Jikọọ gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod na gị PC site eriri USB. Mgbe ha na-njikọ, a usoro ga-ozugbo ịchọpụta gị iOS ngwaọrụ. Ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ, ị ga-ahụ na data na gị iOS ngwaọrụ na-egosi na ekpe ndekọ osisi.
Nzọụkwụ 2. iOS 6 Nhichapụ kọntaktị
Na ekpe kọlụm, pịa "Ndi ana-akpo". Ọ bụrụ na ị bịanyere aka na ụfọdụ akaụntụ na gị iPhone / iPod / iPad, dị ka iCloud, Yahoo! na Exchange, ị ga-ahụ na kọntaktsị na akụkọ ndị a na Ndi ana-akpo udi. Họrọ onye na ị chọrọ ka ihichapụ kọntaktị site na. Mgbe ahụ, na kọntaktị management window na nri ebi ndụ, họrọ gị achọghị kọntaktị ma ọ bụ họrọ niile mgbe ị chọrọ ka ihichapụ kọntaktị niile wee pịa "Hichapụ". Mgbe ahụ, a usoro amalite iji wepụ kọntaktị. Biko cheta bụghị ịkwụpụ gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod na gị PC tupu kọntaktị mwepụ usoro mechie.
Cheta na: All iOS na ngwaọrụ ndị dakọtara na Wondershare TunesGo Ochie. Ha bụ: iPhone 4S / 5c / 4 / 5s / 5 / 3GS, iPod aka 5/4/3, iPad na Retina ngosi, iPad Obere, The New iPad, iPad 2 na iPad.
Ekele! I wepụrụ ndị na-achọghị kọntaktị ọma. Ugbu a, ị nwere ike ngwa ngwa ahụ gị chọrọ kọntaktị mgbe ịkpọ oku mmadụ.
E wezụga ihichapụ iOS kọntaktị, a usoro-ahapụ gị nyefee kọntaktị site na gị iPhone, iPad na iPod ka Outlook. Ọ bụrụ na i nwere ọtụtụ oyiri kọntaktị, a usoro-enyekwara gị jikota ha site iche iche nke email, aha na nọmba ekwentị.
Soro Videoto Hichapụ Ndi ana-akpo si iOS Devices
3 Ụzọ ka mmekọrịta iPhone na Outlook
Atụmatụ maka iji VLC na gị iOS System
Otú nyefee ozi ederede site na iOS 6 ka iOS 7/8/9
> Resource> iOS> Olee otú iji Hichapụ Kọntaktị na iOS na ogbe